Isibaya seenkomo - sincinci, silungile, sikhethekile!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEva-Maria
Indlu eyi-65m2 ikwindawo entle, engasese ePichl kufutshane neWels.
Ngenxa yokuba kufutshane kuhola wendlela i-A8, le ndlu ifikeleleka ngokulula ukusuka macala onke.
Isixeko esinomboniso worhwebo iWels sikumgama oziikhilomitha ezili-15. Iibhafu ezishushu ze-Bad Schallerbach zikumgama we-5km kwaye ke ngoko zibonelela ngokuhlamba kumnandi kunye nokuphumla kuzo zonke imozulu.
Ifulethi elixhotyiswe ngokupheleleyo lilungele izibini, iintsapho kunye neendwendwe zoshishino ezifuna uxolo kunye nokuphumla.
Indala idibana nentsha kwaye kunjalo ngenkulungwane ye-16. indlu endala indlu yanamhlanje, elula kwaye ethokomele. Indawo yokuhlala eqaqambileyo / indawo yokutyela ikhokelela ekhitshini kunye negumbi lokuhlambela elidibanayo. Amagumbi amabini okulala, ngalinye line-180cm yeebhedi eziphindwe kabini, akumgangatho wokuqala kwaye abonakaliswe bubuhle bawo.
Ngokukodwa i-balcony enophahla ikumema ukuba uhlale kwaye ujabulele uxolo kunye nokuzola.
Ngokukodwa kumaxesha anjengala, umntu ukhumbula uxolo kunye nokuba yedwa. Indalo ejikelezileyo ikunika amandla kunye nendawo esembindini e-Upper Austria kunye noqhagamshelo kwindlela yemoto ibonelela ngamathuba amaninzi ohambo. Iibhafu ezishushu ze-Bad Schallerbach zikumizuzu emi-5 ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Eva-Maria
Ummandla wethu uhluke kakhulu kwaye uhle. Nokuba uyonwabele indalo kwindawo okanye ukonwabele iindawo ezininzi zokundwendwela. Sineengcebiso ezininzi ezintle zezibini, iintsapho kunye nabahambi beshishini kuwe!
Emva kokuqinisekiswa kokubhukisha, sinokuqhagamshelana nawe ngefowuni. Ekubeni sihlala kwindlu eselumelwaneni, sinokufikelelwa ngokukhawuleza.
Ummandla wethu uhluke kakhulu kwaye uhle. Nokuba uyonwabele indalo kwindawo okanye ukonwabele iindawo ezininzi zokundwendwela. Sineengcebiso ezininzi ezintle zezibini, iintsapho ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kerschberg